Ecobank yodyara miti muzvikoro
You are at:Home»NHAU DZEMUNO»Ecobank yodyara miti muzvikoro
BHANGA reEcobank — rakabatana nemapoka anochengetedza masango anosanganisira reEnvironmental Management Agency (EMA), Forestry Comission neZimbabwe National Water Authority (Zinwa) — svondo rapera rakadyara miti inokosha $20 000 pachikoro cheUmzururu Primary School chiri kwaZvimba sechikamu chekupemberera zuva reWorld Environment Day.
Bhanga iri riri kutarisira kudyara mimwe miti 25 000 kumativi mana enyika, zvikuru muzvikoro senzira yekuchengetedza nharaunda nekuti veruzhinji vawane michero.
Vachitaura pachiitiko ichi, chamangwiza weEcobank, VaAde Ayeyemi, vanoti bhanga ravo inhengo yePan African Bank uye vane shungu dzekudzorera kunharaunda idzo vanodyidzana nadzo.
VaMoses Kurenjekwa, vanova managing director weEcobank Zimbabwe, vanoti bhanga ravo rine hanya nekusimudzira raramo yevanhu.
“Miti inhaka yeupenyu, pachikoro chino tadyara hekita imwe chete yemapuranga neimwe hekita yemiti yemichero. Mushure memakore matatu tichadzoka tichidya michero uye zvichabatsira chikoro chino nekudya.
“Ndaona mune chirongwa chekuwaniswa kwevana chikafu sesadza asi hapana michero yekuzodya. Saka miti iyi imhinduro kudambudziko renyu nekuti michero inobatsira mukusimudzira utano. Muchakwanisa zvakare kuwana mari apo munotengesa michero iyi uye miti yemapuranga kuvarimi vefodya,” vanodaro.
Bhengi iri rakabatsira zvakare chikoro ichi nemapaipi ekudiridzisa emhando yepamusoro uye vana nevabereki vakawana mukana wekusima miti iyi.
VaLewis Radzire, vanova provincial forestry extension manager kuForestry Commission, vanoti miti mizhinji iri kutemwa zvisina tsarukano nevarimi vefodya asi pasina kuzodyara mimwe izvo zviri kukonzera matambudziko ekusanduka kwemamiriro ekunze.
Ecobank iri kuita chirongwa chekudyara miti pasi pedingindira rinoti, “Miti nhasi, Sango Mangwana” apo iri kusima miti munyika 33 dzainoshanda iri.
Pasi rose, miti 3,5 bhiriyoni kusvika 7 bhiriyoni inonzi iri kutemwa gore negore.